MR MRT: Unconditional Love Story (1) - ခြွင်းချက်မဲ့တဲ့ အချစ်ပုံပြင် (1)
Unconditional Love Story (1) - ခြွင်းချက်မဲ့တဲ့ အချစ်ပုံပြင် (1)
ဒါပေမယ့် ဆရာတော်တွေ ကံကောင်းတယ် ပြောရမလားပဲ။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယ်လို့လဲ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အပြောကောင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆရာတော်က ဓားပြတွေကို အမျိုးမျိုး လှည့်ပတ်နားချပြီး သဘောတူညီမှုတစ်ခု ရယူလိုက်နိုင်သတဲ့။ (ဘယ်လို နားချလိုက်သလဲ မပေးပါနဲ့။) ဆရာတော် ခုနစ်ပါးထဲက ခြောက်ပါးကို သွားလိုရာသွားခွင့် ပေးရမယ်၊ တစ်ပါးကိုတော့ စံပြအနေနဲ့ သတ်ပြရမယ်လို့ သဘောတူသတဲ့။ ခြောက်ပါးရဲ့ ရှေ့မှာ တစ်ပါးကို သတ်ပြပြီး ခြိမ်းခြောက် နှုတ်ပိတ်မယ့် သဘောပေါ့။ သတင်းပေါက်ကြားသွားရင် ကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေကိုပါ လိုက်သတ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
ခေါင်းဆောင်ဆရာတော်ဟာ သီတင်းသုံးဖော် အားလုံးကို ခြွင်းချက်မဲ့တဲ့ အချစ်နဲ့ တစ်ပြေးတည်း တစ်သားတည်း ချစ်ခင်ကြင်နာတော်မူသတဲ့။ ညီမို့၊ ညီမှ၊ မိတ်ဆွေမို့၊ မိတ်ဆွေမှ စတဲ့စတဲ့ အခြေအနေတွေ အငြိုးတွေ အစွဲတွေက ဆရာတော်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မထိန်းချုပ် မကန့်သတ် နိုင်ကြဘူး . . . တဲ့။
Posted by Ashin Acara. at 7:54 AM
Chaw April 17, 2011 at 9:20 AM
Ashin Acara. April 17, 2011 at 8:53 PM
ဆက်မယ် ဆက်မယ်။ သိပ်မကြာစေရဘူး နော . . .။
Chaw April 18, 2011 at 9:10 PM